न्यायालय विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै अघि बढिरहेको छ प्रधानन्यायाधीश | Diyopost
वीर अस्पतालको भेन्टिलेटर खरिदमा मुछिए ईश्वर पोखरेलका छोरा : नयाँ भवन अलपत्र !
पिपिई सेटमा गाउँपालिका अध्यक्ष डल्लाकोटी : आफै चालक बनेर मध्यरातमा विरामीको उद्दार !
काठमाडौं, ३ जेठ । वीर अस्पतालमा अक्सिजन र भेन्टिलेटर उपलब्ध भए ५ सय बेडको नयाँ अस्पताल तयार हुने थियो ।तर, सरकारी लाचारीका कारण हजारौँ नागरिक सडकमै मृत्युवरण गर्नुपर्दा समेत यो…
२४ घण्टामा ९२४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५७६७ निको थप २१४ जनाको मृत्यु
प्रधानमन्त्रीको शपथबिरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, मंगलबार सुनुवाइ
काठमाडौं, ३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार रिट दर्ता गरेको बरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले…
खुशी होलान् त, ‘मदन–आश्रित’ का दिवङ्गत आत्मा ?
काठमाडौं, ३ जेठ । केहीदिनअघि नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा एक कोरोना संक्रमितले एम्बुलेन्स नपाएरै ज्यान गुमाए । जनप्रतिनिधिलाई एम्बुलेन्स मागेको ५ घण्टासम्म एम्बुलेन्स नआएपछि विरामीका आफन्तले ट्याक्टरमै…
अक्सिजनको ‘हाहाकार’मा ‘प्रोपागान्डा’ मच्चाउँदै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल !
काठमाडौं, २ जेठ । राजधानीका सरकारी अस्पतालहरु मात्रै होइन निजी अस्पतालमा समेत अक्सिजनको हाहाकार छ । अस्पतालहरुको दृष्य हेर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट होइन अक्सिजन नपाएर सयौँ नागरिकले मृत्युवरण गरिरहनु परेको…
काठमाडौं, ३ जेठ । केहीदिनअघि नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा एक कोरोना संक्रमितले एम्बुलेन्स नपाएरै ज्यान गुमाए । जनप्रतिनिधिलाई एम्बुलेन्स मागेको ५ घण्टासम्म एम्बुलेन्स नआएपछि विरामीका आफन्तले ट्याक्टरमै अस्पताल लैजाँदै गर्दा विरामीको दुखद निधन भयो । जनताको करबाट…
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनलाई लिएर धादिङमा स्थानियबासी र प्रशासनबीच लफडा
गण्डकी प्रदेशमा थप ८५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सङ्क्रमितले पाए घर-घरमै आयुर्वेदिक औषधि
चितवनमा कोरोनाका कारण थप ११ जनाको मृत्यु
काठमाडौंका १३ सरकारी अस्पतालमा कोभिड ओपिडी सेवा सञ्चालन, ‘सूची सहित’
काठमाडौं, २८ वैशाख । सोमबार बेलुका आइसियु खोज्दै विभिन्न अस्पताल चहारेपछि धादिङका एक विरामी शिक्षण अस्पतालको कोभिड वार्डमा पुगे । तर, अस्पताल पुग्दा अक्सिजनसहितको बेडै थिएन । उनी अक्सिजन विना…
काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागेको विश्वासको मतमा अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले मतदान शुरु गरेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका…
इजरायलको बमबारीमा प्यालेस्टाइनका ५८ बालबालिकासहित कम्तिमा १९२ को मृत्यु
विवाह गर्न केटी पाएनन् तीन करोड चिनियाँले
महंगो डिभोर्स ; बिल गेट्सले पूर्व पत्नीलाई दिए ३ अर्ब डलर !